Indlu Entle Yembali Kwiziko Le-AQP - I-Airbnb
Indlu Entle Yembali Kwiziko Le-AQP
Igumbi lezithandani elinabantu ababini, okanye ukuba ufuna nje ukuphumla uze wonwabele zonke iindawo ezintle ezifumaneka eArequipa.
Yiba yinxalenye yeMbali kwaye wonwabele imimangaliso yokuba isixeko esinemibalabala nesinomtsalane sinokubonelela, ngokuhamba nje imizuzu eyi-5 ukuya ePlaza de Armas, wonwabele ukuhlala kwakho kwiCasona Yembali Eyakhiwe ngo-1800 's enobuhle obuninzi kunye nobuntu obuninzi.
Le ndlu isembindini wedolophu, ikwenye yezona ndawo zikhuselekileyo, ibe zonke iindawo ezinkulu zikumgama nje wemizuzu embalwa.
Igama lam ndinguJohn kwaye ndiza kuhlala ndikuvuyela kakhulu ukukukhokela kuhambo lwakho ukuze ndiqinisekise ukuba uhlala apha eArequipa yindawo ekhuselekileyo kwaye ebaluleke kakhulu kunazo zonke.
Ndikhangele phambili ukudibana nani nonke kungekudala.
Wamkelekile kwisakhiwo seMbali esakhiwe ekuqaleni kweminyaka yoo-1800, usebenzisa ilitye elaziwa ngokuba (Sillar) ukuze lakhiwe elivela kwiNtaba-mlilo.
I-Arequipa igcina obunye ubuncwane bezakhiwo ezibalaseleyo ngexesha lekoloni yasePeru. Iimpawu kunye nobuchule bokwakhiwa kwesi sixeko bekungenxa yezinto ezintlanu: ukwahlukaniswa kweendlela zonxibelelwano, ukuhamba kweentshukumo (iinyikima), i-ashlar, ukungabikho kwamaplanga okubangelwa kukuba kwindawo ephithizelayo kunye nomoya wabantu babo obungathethekiyo. Igama lesiteketiso sesixeko "iCiudad Blanca" (iWhite City) linikwa ngenxa yobuhle bezindlu zabo kunye nezakhiwo ezenziwe nge-sillar.
Le ndlu inobuntu obuthile nendawo yayo yokungena ezimeleyo, ikhitshi negumbi lokuhlambela elinamanzi ashushu. (Ilanga)
4.85 · Izimvo eziyi-180
Eli ziko lizele ziindawo zokutyela ezintle kunye neendawo zokhenketho onokutyelela kuzo, kwaye ndiza kuba khona ukukunceda kuyo yonke le ndlela.
Hi, my name is John and I am 26 years old, Born and raised in London/Wimbledon and i am an International Real Estate Developer travelling around the world absorbing all the beautiful things life has to offer.
Hi, my name is John and I am 26 years old, Born and raised in London/Wimbledon and i am an International Real Estate Developer travelling around the world absorbing all the beauti…
Igama lam ndinguJohn kwaye ndiza kufumaneka ukuze ndincedise nangayiphi na indlela ukuqinisekisa ukuba uhlala kamnandi.